भाटभटेनी सुपरमार्केटको ठगी धन्धा, सपिङ जाँदा ख्याल गर्नुहोस् !! – Nepal
अप्रील 11, 2018 अप्रील 12, 2018 admin	Comment(0)
काठमाडौं, भाटभटेनी सुपरमार्केट नेपालको नाम चलेको ब्रान्ड हो। एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा यसको सुपरस्टोर छ। त्यही मध्येको एक कलंकीमा शनिबार सपिङ गर्दाको अनुभवबाट तपाईँलाई सचेत गराउँदैछु- ध्यान दिनुस् नत्र ठगिनु होला।
शनिबार राति सपिङ गर्ने क्रममा सामान लिँदालिँदै २५ थोक पुगेछ। स्टोर बन्द हुने बेला भइसकेको थियो। काउन्टरमा बसेकी कर्मचारीले एक-एक गर्दै सबै सामानको कोड रिडिङ गर्दै कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दै बिल निकालिन्- ११ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ ९६ पैसा।
अर्थात् दुई सेटको ८१४ रुपैयाँ १६ पैसा हुनुपर्नेमा ४ हजार ७० रुपैयाँ ८० पैसा पो बढी बिल गरेको रहेछ।भोलिपल्ट त्यहाँको अफिसमा फोन गर्दा बिल र सामान लिएर आउनुस् भनियो। साँझतिर त्यहाँ पुग्दा गल्ती भएको स्वीकार गरे उनीहरुले। यहाँसम्म त ठीकै थियो। अचम्म त के लाग्यो भने उनीहरुको गल्तीको सिकार हामी उपभोक्ता हुनुपर्ने रे। गल्ती हो, स्वीकार पनि भइसक्यो। तर त्यो उनीहरुले बढी लिएको रकम फिर्ता भने दिन मिल्दैन रे। त्यति नै रकमको सामान अरु लिइदिनुस् न रे। लानुपर्ने जति सामान हिजै लगिसकियो, अब के लाने ? यसो भन्दा पनि भएन। उनीहरुको हिसाब मिल्दैन पो भन्न थाले।
त्यो हाम्रो समस्या हो ? गल्ती उनीहरुको भएपछि र त्यसलाई स्वीकार पनि सकेपछि फेरि ग्राहकलाई नै त्यो गल्तीको भार बोकाउनु पर्ने के खालको नियम तपाईँहरुको हो यो ? यस्तो नियमले तपाईँहरुप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ भन्ने ठान्नुभएको छ ?स्रोत विक्रम एसियन समाचार डट कम
अप्रील 5, 2018 अप्रील 12, 2018 admin
आफूलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एआइजीकी श्रीमती हुँ भन्दै ठगी गरेको आरोपमा तनहुँकी एक महिला पक्राउ परेकी छन्। तनहुँको ब्यास-११ बस्ने ४० वर्षीया यमुना खड्कालाई सवा करोड ठगीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सिपाही तथा असई बनाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट करोडौं रूपैयाँ ठगेको आरोपमा उनी पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ। […]